» के गर्मीमा कोरोना भाईरसको संक्रमण घट्छ ?घटेन भने विश्वमा कस्तो परिस्थिति आउला ?
के गर्मीमा कोरोना भाईरसको संक्रमण घट्छ ?घटेन भने विश्वमा कस्तो परिस्थिति आउला ?
२ चैत्र २०७६, आईतवार १७:३३
यस वर्षको सुरुवातसँगै चीनमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिरहँदा यसको प्रभाव यति भयङ्कर होला भनेर धेरैले अनुमान गरेका थिएनन् होला । मौसमी फ्लुकैजस्तो लक्षण देखिएको यो भाइरसको संक्रमणले अहिले विश्व नै प्रभावित भएको छ ।
चिसो मौसममा हुने इन्फ्लुएन्जा र कोरोनाभाइरसको संक्रमणका लक्षणमा धेरै समानता रहे पनि संक्रमितको मृत्युदरमा भने निकै भिन्नता छ । इन्फ्लुएन्जासँगै लक्षणहरुको समानता रहेका कारण कतिपयले कोरोनाभाइरसको संक्रमण चिसो मौसमको समाप्तिसँगै अन्त्य हुने अनुमानसमेत गरे । के गर्मी मौसम लागेसँगै कोरोनाको प्रभाव अन्त्य होला त ? वैज्ञानिकहरुबाट प्रष्ट जवाफ नआए पनि कोरोना संक्रमण, यसले विश्वको खास भूखण्डमा पारेको प्रभाव लगायत विविध पक्षमाथि केन्द्रित रहेर अनुसन्धानहरु भइरहेका छन् ।
अमेरिकी सैन्य चिकित्सा शोधकर्ता नेलशन माइकलका अनुसार कोरोनाले चिसो मौसममा मात्र बढी प्रभाव पार्ने देखिन्छ । इन्फुएन्जा चिसो मौसममा हुर्कन्छ त्यसैले चिसोमा उत्तरी गोलाद्र्धका अधिकांश हिस्सामा यसको प्रभाव बढी देखिन्छ । यसैका आधारमा कोरोनाभाइरसको प्रभाव पनि गर्मीमा घट्न सक्ने उनको अनुमान छ ।
तर, गर्मीमा यसको संक्रमण घटेन भने विश्वमा कस्तो परिस्थिति आउला ? हाल गर्मी सिजन रहेको सिंगापुरमा एक सयभन्दा बढी संक्रमित देखिएको परिस्थितिले विश्वलाई झस्काइदिएको छ । यतिमात्र होइन, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, अर्जेन्टिना जस्ता मध्यगर्मी झेलिरहेका मुलुकमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ ।
यद्यपि उनले गर्मीको अन्त्यपछि आउने जाडो मौसममा कोरोनाभाइरस अझ शक्तिशाली भएर आउन सक्ने सम्भावना पनि औँल्याएका छन् । ‘अर्को जाडोमा यो फेरि आउन सक्छ,’ उनले भने ।
उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने गर्मी मौसममा कोरोना संक्रमण दर घट्न सक्छ र कोरोनाको त्रासदीबाट विश्वले केही राहत महसुस गर्न सक्छ । त्यतिन्जेलमा यसको खोप तयार पार्न, यसबाट भएका क्षतिलाई पूर्ति गर्ने गरी सरकारहरुले काम गर्न समय पाउने छन् ।
कोरोनाभाइरसबारे अध्ययन गरिरहेका वैज्ञानिकहरुका अनुसार एउटा निश्चित वातावरण र क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखिएको छ । कोरोनाभाइरसको पहिलो संक्रमण फेला परेको चीनको ऊहानदेखि लिएर इरान, इटाली र दक्षिण कोरिया पृथ्वीको लगभग समान अक्षांसमा पर्दछन् । यी मुलुकमा लगभग उस्तै तापक्रम र सापेक्ष आद्र्रता पनि छ ।
न्यूयोर्कस्थित साइराकुज विश्वविद्यालयकी जनस्वास्थ्य विज्ञ ब्रिटनी मुश भने यो भाइरसले समान मौसमी प्याटर्न पालना गर्नेमा विश्वस्त छैनन् । इन्फ्लुएन्जा र अन्य मौसमी भाइरसले भने मौसमी प्याटर्न पालना गरे पनि कोरानाको बारेमा यसै भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
रुटगर्स न्यूजर्सी मेडिकल स्कुलमा संक्रामक रोगबारे अध्ययन गर्दै आएका डेभिड सेन्निमो आशा नै यतिबेलाको सही शब्द हुने बताउँछन् । उनी गर्मीसँगै कोरोना संक्रमण घट्नेमा आशावादी छन् । गम्भीर संकट झेलिरहेका मुलुकले यसबाट पार पाउने उनको अपेक्षा छ ।
ब्रिटनी र डेभिड चाँडै नै कोरोना संक्रमणको मौसमी प्याटर्नबारे भौगोलिक डाटाअनुसार ठोस निश्कर्ष आउने विश्वास गर्दछन् ।
रुटगर्सकै सहायक प्रोफेसर डेब्रा चेउ कोरोनाभाइरसलाई अन्य मौसमी फ्लुजस्तो आँकलन गर्न नहुने बताउँछन् । अन्य भाइरसले प्रत्येक वर्ष अनुमानित असरमात्र गर्ने भए पनि कोरोना त्यस प्रकारको श्रेणीमा नरहेको उनको भनाइ छ ।
यो साता कोरोनाभाइरस विश्वमै आक्रामक रुपमा फैलिएको पाइयो । वैश्विक रुपमा संक्रमितको संख्या र मृतकको संख्यामा आक्रामक वृद्धि भए पनि सुरुमा संक्रमण देखा परेको चीन र त्यसपछि संक्रमण झेलेको दक्षिण कोरियामा भने नयाँ संक्रमणमा कमी आएको छ । यो एउटा सकारात्मक पाटो भएको वैज्ञानिकहरुको भनाइ छ ।
ती मुलुकमा स्वास्थ्य अधिकारीहरुले दिएको चेतावनीअनुसार नै ‘लक डाउन’ देखि लिएर यात्रामा प्रतिवन्ध, प्रभावित क्षेत्रमा जनताको सहयोग लगायतका कारणले नै संक्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन ठूलो सफलता मिलेको देखिन्छ ।
विश्वका अन्य हिस्सामा भने यस प्रकारको कडा प्रतिबन्ध र सचेतता अपनाएको पाइँदैन । कतिपयले मौसम परिवर्तनसँगै यसको प्रभाव घटने आशामा सामान्य सतर्कतामात्र अपनाएको पाइन्छ ।
ब्रिटनीका अनुसार गर्मीमा भाइरसको संक्रमण घटेको खण्डमा पनि अर्को जाडो सिजनमा यसको पुनरागमन हुन सक्ने सम्भावनालाई ख्यालमा राखेर सतर्कता अपनाउनु वुद्धिमानीपूर्ण हुने छ । किनकि यो भाइरसका बारेमा धेरै कुरा थाहा हुन बाँकी नै रहेका कारण ढुक्क भइहाल्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।